Izindaba - Suntop othomathikhi 3000W fibre laser cutting umshini ukufakwa eFrance ngempumelelo
Kusuka ocwaningweni nasekuthuthukisweni kuya ekuklanyweni kuya ekukhiqizeni, ngemuva kwezinsuku ezingama-40 zemizamo yabo bonke abasebenzi be-SUNTOP, senze ngezifiso ukuzondla nokuzitholela ngokuphelele umshini wokusika we-CNC fiber laser uphumelele ukufakwa eFrance.
Ijubane eligijimayo lokulayisha nokulayishwa kuyashesha kakhulu, okuyizikhathi ezi-2 zokulayisha nokuthulula uhlobo lwe-cantilever eJalimane e-workshop efanayo. Ikhasimende lineliseke kakhulu ngobuchwepheshe be-SUNTOP yethu.
Muva nje i-SUNTOP ithuthukise ngempumelelo uhlelo lokuphakela nokuthulula oluzenzakalelayo ngokuphelele olunamandla angu-2500KG afanele ukulayishwa nokulayishwa kwensimbi okukhulu futhi okukhulu, izokonga kakhulu izindleko zabasebenzi, yenze indawo yokusebenzela inganakwa ngempela, futhi ibeke isisekelo esihle semboni 4.0.
Ngokombono wabadayisi bezimakethe, ukungeniswa nokuthunyelwa kwamabhizinisi azimele kukhuphuke kakhulu, futhi indima yezohwebo lwangaphandle “yokusimamisa” yayigqame kakhulu. Imininingwane ikhombisa ukuthi ezinyangeni zokuqala eziyi-10, ukungeniswa nokuthunyelwa kwamabhizinisi azimele kufinyelele ku-12 trillion yuan, ukwanda ngo-10.5%, okubalwa ngama-46.2% wenani lonke lokuhweba langaphandle laseChina, ukwanda kwamaphesenti angu-3.9 amaphuzu ngesikhathi esifanayo ngonyaka odlule . Phakathi kwabo, ukuthekelisa kwakungu-7.94 trillion yuan, ukwanda ngo-10.9%, kubalwa u-55.4% wenani eliphelele lokuthumela ngaphandle; ukungeniswa bekuyi-yuan engu-4.06 trillion yuan, inyuke ngo-9.7%, ebala u-35% wenani eliphelele lokungenisa.
Uma sibheke phambili esikhathini esizayo, kulindeleke ukuthi ukuhwebelana namanye amazwe onyakeni wonke kuzoqhubeka nokugcina isimo sizinzile futhi sihle. UTang Jianwei, umcwaningi oyinhloko wesikhungo sokucwaninga ngezezimali seBhange lezokuxhumana, uthe inani lokungenisa kanye nentengo yensimbi yensimbi, ubhontshisi wesoya kanye nezinye izinto ezinkulu zenyukile, okukhombisa ukuthi isidingo sasekhaya asikabi buthakathaka. Inkomba yokungenisa i-PMI ngo-Okthoba yayingu-50.8%, amaphesenti angu-0.4 amaphuzu aphezulu kunalawo enyanga eyedlule, futhi yayingaphezulu komugqa wokuqhuma nezinyanga ezimbili ezilandelanayo. Ngokutholwa kokusetshenziswa kwasekhaya kanye nesidingo sokukhiqiza, ukungenisa okulandelayo kulindeleke ukuthi kuqhubeke.
Umshini wokusika we-Tube Laser, Pipe Fibre Laser umsiki, Umshini Wokusika i-Fiber Laser Pipe, Umshini Wokusika we-China Fibre Laser, Umsiki we-Tube Laser, Umshini Wokusika i-Fiber Laser,